Magro | GAZETY_ADALADALA
Sakoroka androany 10 Novambra 2010
Posted on 10/11/2010 by gazetyavylavitra
Dia raikitra indray ny sakoroka androany 10 Novambra 2010, taorian’ny nandraràn’ny prefektioran’ny polisy tsy hampiasan’ny Ankolafy Telo avy etsy amin’ny MAGRO ny kianja MALACAM Antanimena. Raha ny filazan’ny nanatri-maso ny fiandohany dia tany amin’ny 12 ora antoandro tany no nanomboka ny fangalam-piery.
Nisavoritaka tsy nisy hoatr’izany ny fifamoivoizana teto Antananarivo renivohitra, ka samy nitady làlana izay azony hanavotana ny ainy ny rehetra, na olona io na mpamily fiara. Nanery ireo mpamily fiara hianika an’Ambatonakanga sy Antaninarenina ny zava-misy.
Niova làlana nankany Amparibe sy Mahamasina ny taxibe
Fa izay tiana ho tsindriana fotsiny dia ity fanimbàna zavatr’olona sy famotehana ny fananan’ny hafa atao rehefa isak’izay misy fihetsiketsehana ity. Fiara roa (lazaina ho ana teratany karana avokoa) no nodoran’ireo mpanao fihetsiketsehana androany.
Fiara nodorana teo anoloan'ny Kolejy Saint François Xavier Annexe (Notre Dame teo aloha) - Antanimena ambany - Karana iray no tao anatiny
Ny iray tetsy Antanimena ambany, nanoloana ny Kolejy Notre Dame, raha teo amin’ny sampanana akaikin’ny foibe ara-tsaina Arabo Libiana teo aloha kosa ny faharoa
Teo amin'ny sampanana manoloana ny foibe ara-tsaina Arabo Libiana taloha - Fiara avy nàka zanaka karàna avy nianatra
Feo heno tety ihany koa moa ny hoe
Mila mandoro fiara isika, atao hitan-dry XXXXreo
Natosiky ny mpitandro filaminana tamin’ny baomba mandatsa-dranomaso aloha ireo mpanimba zavatra,
nalefa ny baomba mandatsa-dranomaso mba hanosehana ny olona
Vonoina sao hitera-doza, eny fa na dia ho an'ny fahasalamana fotsiny aza
ary rehefa avy eo dia nisy mpiasan’ilay tobin-tsolika nitondra famonoana afo mba hamonoana ny afo sisa tsy maty famin’ilay fiara nodoran’ireo mpanimba zavatra.
Tsy nijanona tamin’ireo ny fandoroana fa hatramin’ireny trano hazo kely napetraka ho fanatanterahana asa teny anivon’ny zaridainan’Antanimena ireny koa aza dia lasibatry ny afo.
Ilay tranohazo teo an-jaridaina afovoany Antanimena
Ny aza sendra ny mifanena tsy nahy tamin-dry zareo aloha fa dia mety hanidina ny « pare-brise » e! – 4L taxi sy Jeep Cherokee ana teratany vahiny no niharan’ny setrasetra sy ny fanimbàna teny Antanimena nandritra ity andron’ny 10 Novambra 2010 ity.
Raha ny filazan’ny sasany tamin’ireo namana tafaraka teny mantsy dia nisy izany lehilahy vaventy iray izany rehefa nivoaka avy tao amin’ny MAGRO, dia efa feno rà ny tànany. Tsy fantatra hoe naninona, ary ràn’inona, na ràn’iza. Rehefa tonga tety an-dalam-be, hono, io ranamana io dia tsy nanao afa-tsy ny nila vaniny tamin’ny fiara sendra azy, ary isan’ny namaky ny fitaratry ny fiara iray teny amin’ny manodidina ny toerana nifamorian’izy ireo. Teo Andravoahangy ambony tsy lavitra ny tetezana no nisy iray tratran’ny toy izany, ankoatry ny sasany teny amin’ny manodidina ny MAGRO sy Antanimena. Tsara ihany araka izany ho an’ny mpamily fiara ny mba mihaino vaovao fa tsy ho faly rotsorotsian’ny hira fotsiny eny an-dàlana eny, ka tafalatsaka anaty kizo vao taitra. Maro amin’ny mpamily mantsy (indrindra fa ny taxibe, toy ity 183 ity) no tsy tia mihaino resadresaka amin’ny fampielezam-peo, fa raha vao izay no mitranga dia kinga ery iny tànana iny mamadika onjam-peo mitady hira. Hay vidiana lafo ihany ny hirahira fa dia mampatory saina tokoa an!
Mba henoy amin'ny sisa ny fampielezam-peo fa aza dia sondriana amin'ny hira fotsiny e!
Zavatra tsinjo tetsy Behoririka akaikin’ny « Look’s » ny fahasahiana diso tafahoatra nananan’ny sasany tamin’reo mpanao fihetsiketsehana, satria dia voalazan’ny mpitandro filaminana iray nanao fanamiana sivily miara-mitankosona amin’ireo mpanao fihetsiketsehana mba hanangom-baovao, fa nisy lehilahy iray nitondra fitaovam-piadiana tao anatin’ireto farany. Efa naparitaka moa ny mombamomaba an-dranamana, ny fitafiany manomboka any an-tampon-dohany ka hatrany am-paladiany, saingy tafaporitsaka ny anao lahy
segondra vitsy taorian'ny nadalovan'ireto mpandalo ireto dia nisy vato natota sy kesika natsipy avy tany ambony tetezana. Saiky loza
Feo re teny an-toerana ihany koa no nahalalàna fa hiandry ny andro maizina ireto mpanao hetsika ireto (na mety ho ny mpanararaotra) mba hamerenana eto Antananarivo ny zava-nitrana tamin’ny 26 Janoary 2009. Ary mety ho ny OPK no ho itarihana azy. Feo re teny antsefantsefam-bohitra teny daholo izany ampitaintsika eto izany.
Raha izany no nitranga androany, mba hanao ahoana re ny fihantsiana nataon’i Monja Roindefo ny amin’ny tsy maintsy hihaonany amin’ny vahoakan’Antananarivo amin’ny Sabotsy 23 Novambra 2010 e?
Dia izao tokoa ve ilay hoe tsy avela hisy fitsapan-kevi-bahoaka izany eto na ho inona na ho inona?
Sadasada manan-tsoratra ihany tokoa aloha ilay ho fitsapana hevitra e! Ary ny mahavalalanina ny maro dia ny filazana zava-bita etsy sy eroa, na fampanantenana zavatra hatao mandritra ireny fitsidihana ofisialy ataon’ny mpikambana ao amin’ny HAT isaky ny faritra ireny – ankoatry ny hoe fanazavàna ny votoatin’ilay volavolan-dalampanorenana. Ny zavatra toy izany mantsy no efa nanakianana ny teo aloha, ary tsy lanin’ny vavonin’ny vahoaka, nefa dia mbola TIM (ny Teo Ihany no Miverina) hoy ny maro. » Am-bava homana, am-po mierotra » hoy ny ohabolan’ny Ntaolo.
Rehefa tsy milatsa-dranomaso noho ny baomba, dia tsy mifankahita noho ny setroka doro fiara
Mainty noho ny setroka doro fiara ny lanitr’Antananarivo androany hariva, ary mbola nanakoako teny Behoririka sy Andravoahangy ny fanapoahana baomba mandatsa-dranomaso hatramin’ny 7 ora sy sasany hariva tany ho any.
Tsy tsara ho an'ny marary tratra ny nandalo teto
Sempotry ny setrok ireo trano teto amin'ny manodidina. Tsy lavitra tobin-tsolika SHELL koa ilay firehetana
Raha tsy niova ny zavatra hita talohan’ny ora nialàna teny an-toerana dia 3 lahy 2 vavy no voasambotra ka isan’izany ireto
ireo 2 lahy efa tafiditra tao anaty fiara
ilay iraikalahy fanintelony nenjehina hatrany anaty tranon'olona
Fetison Andrianirina sy Lalatiana Ravololomanana ary Yves Aimé rehefa tonga tao amin’ny MAGRO ka nilaza tamin’ny mpomba azy fa hifampiraharaha amin’ny mpitandro filaminana
dia novalian’ny olona fa tsy misy an’izany, toa izahay vahoaka foana no arosonareo, nefa avy eo tsy hita ianareo
Tohiny: tsy hita vetivety teo ireto mpitarika ary tsy voafehy intsony ny olony.
Rehefa naparitaka ireo olona avy ao Antanimena dia nizarazara ny làlany ka nisy ny rantsana nankany Analakely ary nikasa handoro ny Lapan’ny Tanana vaovao, izay 38 taona mahery taty aoriana vao nisy nahavita namerina indray. Raha tara kely foana ny mpitandro filaminana dia efa « vita matavy » ilay Lapa satria efa tonga teo an-toerana ny tavoahangy plastika nisy lasantsy.
TV Plus Madagascar: Nisy ny andian’olona, izay nahitana vehivavy, nitarika sy nandrindra ny asa fankorontanana natao teo Behoririka, hoy ny olona iray miasa eo akaikin’ny faritra nitrangan’izany, no sady nandre sy nahita maso ireto andian’olona ireto, saingy noho ny tahony dia tsy sahy naka sary fa nitadidy kosa ny amin’ireo olona ireo (efa nampitain’ny TV Plus Madagascar tamin’ny vaovaony ny andron’ny 10 Novambra 2010 ny mombamomba ireo olona ireo, niaraka amin’ny fitantaran’ilay vavolombelona)
Filed under: fiaraha-monina, politika, tantaram-pirenena, tapatapany | Tagged: 10 Novambra 2010, 23 Novambra 2010, Ambatonakanga, Amparibe, andravoahangy, Antananarivo, Antaninarenina, Behoririka, Fetison Andrianirina, HAT, Lalatiana Ravololomanana, look's, Magro, Mahamasina, MALACAM, sakoroka, TIM, TV PLUS MADAGASCAR, Yves Aimé |	Leave a comment »
Fréquence Plus 67Ha (suite)
Posted on 18/05/2010 by gazetyavylavitra
Mihevitra ireo mpomba ny HAT fa hoditr’akondro atsipy ho an’ny HAT ny zavatra natao teny amin’ny Fréquence Plus tamin’ny Sabotsy tolakandro iny. Misy hoy ny fanehoan-kevitra avy amin’ny olona maro ny tsy faly tamin’ny fanambaran’i Andry RAJOELINA fa tsy hilatsaka amin’ny fifidiana ho filoham-pirenena ny tenany. Be araka izany hoy hatrany ny fanambarana sy ny antso an-telefaonina no very fihinanana sy diso fanantenana ary matahotra ny ho tohin’ny ampitsony.
Amin’izao fotoana dia efa nalefa eny amin’ny CCO ny antontan-taratasy mikasika ny raharaha 07 Febroary 2009 izay voalaza fa mahavoarohirohy olona 19.
Ny etsy amin’ny MAGRO Behoririka anefa milaza indray fa hanamafy ny hetsika amin’ity herinadnro ity. Hafana indray izany ny toe-draharaha, satria Camille Vital koa nanao fanambarana fa tsy hitsitsy izay manelingelina ny filaminam-bahoaka. Efa taratr’izany sahady raha ny zavatra niseho omaly teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai sy ny manodidina, izay nahitana fiaraben’ny mpitandro filaminana 3 na 4 teo.
Nafana ny fanentanana tao ankianja hoy ny nanatri-maso ary isan’ny tena ventin-kanina tao ny raharaha nisamborana an’ireo teny amin’ny Fréquence Plus, ka nitazonana am-ponja an’i Tonton Ambroise eny Antanimora amin’izao fotoana izao, mandra-piandry ny fitsarana azy amin’ny 27 Mai ho avy izao. Heloka itazonana azy ny faniratsirana filohana andrim-panjakana.
Fa miresaka fanamafisana hetsika izay ihany, dia mikononkonona ny hanao ny hetsika faha-8 azy ireo ihany koa izao ny Hetsiky ny mpitondra Fivavahana. Tsy mbola fantatra na ho Antsahamanitra, na ho Antsonjombe fa dia hoe ho hetsika lehibe amin’ny Alakamisy raha ny resaka mandeha.
Nanameloka ity fikasihan-tanana ny REPORTERS SANS FRONTIERE izay milaza fa toy ny natao takalon’aina ny mpanao gazety. Nokianiny ny fomba nisamborana sy ny fanimbana ny fitaovana izay manohintohina ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalaham-pitenenana.
Ny fikambanan’ny mpanao gazety Malagasy koa dia nangata-panazavana amin’ireo manampahefana isan’ambaratonga sy nangataka ny hanafainganana ny fanadihadiana ny zava-niseho.
Filed under: fiaraha-monina, haino amanjery, politika, tantaram-pirenena, tapatapany | Tagged: AMBROISE, Behoririka, Camille, CCO, Frequence Plus, HAT, Magro, Rajoelina, Reporters sans frontiere |	Leave a comment »
Filed under: anao ny fitenenana, fifandraisana iraisam-pirenena, politika, tantaram-pirenena, tapatapany | Tagged: FIGM, HAT, Madagasikara, Magro, Malagasy, miaramila, RAS, Ravalomanana, Raymond, zandary |	Leave a comment »